Ike Ike Max P18K Pop: Ekwentị nwere batrị 18.000 mAh | Gam akporosis
Izu ole na ole gara aga ọ gosipụtara na Energizer ga-eweta smartphone na a 18.000 mAh batrị. Ọ bụ ezie na-atụ anya na kwuru ngosi ga-ewere ọnọdụ na MWC 2019. N'ezie, ika a nwere nnukwu atụmatụ maka ihe omume telephony na Barcelona. Ebe ọ bụ na ha na-atụ anya ka iwebata 26 ọhụrụ smartphones na ihe omume. A na-atụ anya ọtụtụ akụkọ n'aka gị.
Mana ịmata ama ama 18.000 mAh nke ụlọ ọrụ ahụ, anyị ekwesịghị ichere ogologo oge. Kemgbe a Energizer Power Max P18K Pop ka a mara ọkwa ọkwa. O doro anya na ama na-akpọ ka iju. Maka na ọ bụ ụdị nwere batrị kachasị na ahịa taa.
Ihe nlere a jikọtara ọkwa ndị ewepụtara ihe karịrị otu izu ụka gara aga. Akụkụ bụ isi nke Energizer Power Max P18K Pop bụ nnukwu batrị ya. Mana ọ bụghị naanị ihe na-adọta uche gaa na ya. Ebe ọ bụ na ngwaọrụ na-abịa na kwuru retractable igwefoto, nke ga-abụ ihe ọzọ n’afọ a.
Nkọwapụta Ike Ike Max P18K Pop
A ga-egosipụta ngwaọrụ a na MWC 2019. Ọ bụ ezie na ugbu a anyị enweworị akụkụ nke nkọwa ya, yabụ anyị nwere ike ịnweta echiche doro anya banyere ihe ị ga-atụ anya na ngwaọrụ a. Ya mere, anyị amaraworị ihe ị ga-atụ anya na nke a Energizer Power Max P18K Pop na ihe omume na Barcelona na njedebe nke ọnwa. Anyị nwere ike ịtụ anya ịdị mma n'etiti etiti na nke a:
Ihuenyo: 6,2 sentimita asatọ na mkpebi HD
NhaziMediaTek Helio P70
Rear igwefoto: 12 MP + 5 MP + 2 MP
Igwefoto n'ihu: 16 + 2MP
Batrị: 18.000 mAh
O doro anya na ama ama dị ịtụnanya banyere nkọwa. Ebe ọ bụ na ọ ruru n'etiti, mana yana usoro dị egwu, mana mkpebi na-atọ ụtọ n'akụkụ nke Energizer. Na otu aka, ụlọ ọrụ ahọrọla nnukwu ihuenyo, nke nwere okpokoro osisi dị ezigbo mkpa, ihe fọrọ nke nta ka ọ ghara ịdị. Ọ bụ ezie na ọ nweghị oghere ma ọ bụ akara na ihuenyo ahụ. Ihe ọtụtụ ndị ọrụ ga-amasị. Igwefoto dị n'ihu nwere ike iweghachi
Ọ maraworị na ika ga-nzọ na sistemụ a n'ụdị ụfọdụ. Ugbu a, anyị maara nke a Energizer Power Max P18K Pop nke na-abịa na igwefoto kwuru. Ọ bụkwa igwefoto abụọ, 16 + 2 MP. Ya mere, a na-atụ anya na ha ga-enwe ike iji ezigbo selfies na ya. Anyị enwebeghị ike ịhụ sistemụ ahụ na-arụ ọrụ. Anyị ga-echere MWC 2019 iji hụ otu esi webata sistemụ na ngwaọrụ.
Nke a Energizer Ike Max P18K Pop na-ahapụkwa anyị ihe ịtụnanya dị n’azụ. Ebe ọ bụ na ngwaọrụ na-abịa na a atọ Mmaji igwefoto. Anyị na-ahụ otú ọtụtụ igwefoto si ghọọ ihe nkịtị n'etiti etiti. Camerasfọdụ kamera 12 + 5 + 2 MP, nke doro anya na-ekwe nkwa ịrụ ọrụ nke ọma. A na-atụ anya na a ga-enwe ọnụ ọgụgụ nke ọgụgụ isi na ha.
Ihe nke g'atu anyi anya n'ihi na ama na-abịa na nhazi Helio P70. Ihe nhazi MediaTek maka etiti, mana nke ahụ na-eme ka ọgụgụ isi na-enweghị atụ. Ọ na-abịa RAM 6 GB na 128 GB nke nchekwa dị n'ime. Ngwakọta dị mma, nke doro anya na-enye gị ike zuru oke n'oge niile.
Agbanyeghị, anyị enweghị ike ichefu maka mkpọ ya. Ọ bụ ebe siri ike nke Energizer Power Max P18K Pop. Batrị nwere ikike 18.000 mAh, nke bu ihe gam akporo nke nwere batrị di uku na ahia taa. Ekwenyela na ọ ga-abịa ụgwọ ngwa ngwa, otu ihe nlereanya na inwe teknụzụ a. Anyị amaghị ụdị ụgwọ ngwa ngwa ihe nlere a ga-ebu. Ekele maka batrị a ị nwere ike ikwu oge 90, gee ntị n'ihe dị ka awa 100 nke egwu ma lelee ụbọchị abụọ nke vidiyo niile na-enweghị nkwụsịtụ. Dị ka ika ahụ si kwuo, enwere ike ịgbanye ya ruo ụbọchị iri ise.
Na MWC 2019 anyị ga-amatakwu banyere ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Ike Ike Max P18K Pop: Smartphone nwere batrị 18.000 mAh
Pushbullet ka dị ndụ ma dịkwa mma - emegharịrị na Nhazi Ihe, ọnọdụ gbara ọchịchịrị na ndị ọzọ